अर्को दिन अन्तर्वार्तामा, म लामो समयको लागि कुर्दै थिएँ र अन्तमा एक विदेशीसँग पठाइएको थियो। उनले आफूलाई जेरेल मोरालेसको रूपमा परिचय गरे; मेरो लिखित र मौखिक मा एक विज्ञान र गणित शिक्षक को लागी अन्तर्वार्ता र प्रिन्सिपल संग दोस्रो अन्तर्वार्ताको लागि मलाई लग्यो। मेरो तलब १२००० / – मा अन्तिम रुप दिइसके पछि उनले मलाई बताइन कि यदि म चयन भएँ भने पनि मलाई बताउन। श्रीमती जेरेल मोरालेसले अन्तर्वार्ताका लागि देखाएकोमा मलाई धन्यवाद दिए र यो मसँग कुरा गर्दा ठूलो थियो। मैले सोचें कि म चयन गरिएको छैन र अर्को ठाउँमा राम्रो भाग्यको इच्छा गर्छु!
अर्को दिन मलाई फेरि बोलाइयो; मेरो लागू गरिएको स्थितिको लागि कामको वर्णन भन्दा बढी कुरा गर्‍यो। “मुलुकका एक प्रतिष्ठित स्कूलको उत्पादन हुदैछ जुन सीभीबाट देख्न सकिन्छ तपाई सी.भी.मा देखेर क्रियाकलापमा सक्रिय हुनुपर्दछ,” उनले मलाई चकित पारे। “के तपाईं स्कूलको गतिविधिको लागि विद्यार्थीहरूको सहभागीको नाम संकलन र उप प्रिन्सिपललाई बुझाउन सक्नुहुन्छ?” मेरो घबराहटको कारणले गर्दा म यो कुरालाई बुझ्दछु। मैले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएन तर नामहरू राख्नु धेरै सजिलो कामको रूपमा यसमा सहमत भएँ जबकि म GAA बाट घटनाहरू समन्वय गर्दै थिएँ। उनको श्रीमती जेरेल मोरालेसका अनुसार, जो अघिल्लो वर्ष गरिरहेका थिए, उनी यस बर्ष स्कूलको V.P को रूपमा नयाँ नियुक्तिको रूपमा यस वर्ष व्यस्त हुनेछन्।
एक पटक शैक्षिक सत्र सुरु भयो र E.C.A गतिविधिहरू सञ्चालन हुनुपर्‍यो मलाई श्रीमती जेरेल मोरालेसले बोलाएको थियो। उनले सोधिन् “के तपाइँ स्कूलको गतिविधिहरु संगठित गर्न चाहानुहुन्छ? दसौं कक्षाका नयाँ अ English्ग्रेजी शिक्षक भोजले पनि त्यस्तै पदमा चासो देखाए। तर उहाँलाई गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कुनै अनुभव छैन। “मैले मेरो चासो देखायो। उनले मलाई प्रिन्सिपलसँग थप भुक्तानीको बारेमा कुरा गर्न भने। मैले प्रिन्सिपलसँग कुरा गरेँ र E.C.A Coordinator को रूपमा नियुक्त भए। मैले नयाँ अवसर पाएँ र मेरो थप भुक्तानीका लागि मेरो पारिश्रमिक Rs००० / – बढाइयो।